Faly ny fizahantany any India noho ny fanamaivanana nataon'ny governemanta tamin'ny krizy COVID-19 mafy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Faly ny fizahantany any India noho ny fanamaivanana nataon'ny governemanta tamin'ny krizy COVID-19 mafy
Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Fizahan-tany any India
Ny Association Association of Tour Operations (IATO) Indiana dia naneho ny fankasitrahany an'i Hon. Ny praiminisitra sy ny Hon. Minisitry ny fitantanam-bola noho ny fanomezana fanampiana kely ho an'ny indostrian'ny fizahantany, anisan'izany ny visa 5 lakh maimaim-poana azo ampiharina hatramin'ny 31 martsa 2022, isaky ny misokatra ny visa.
Ny filohan'ny IATO Andriamatoa Rajiv Mehra dia nanaiky ny fanohanan'ny Hon. Minisitry ny fizahantany mandritra io fotoan-tsarotra io.
Ny fanamarihana dia nataon'ny Hon. Minisitry ny vola tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety natao ny 28 jona 2021 tolakandro.
Ny fanampiana dia natolotra ho an'ny sehatry ny fizahan-tany simba izay misy mpizahatany mpizahatany sy mpitari-dia mpizahatany voasoratra anarana.
Nilaza Andriamatoa Mehra fa manantena izy fa hisokatra tsy ho ela ny visa e-Tourist ary nanao antso avo amin'ny Hon. Ny praiminisitra fa ny visa rehetra mandritra ny 30 andro dia tokony ho maimaimpoana ho an'ireo rehetra mangataka visa hatramin'ny 31 martsa 2023.
Misaotra ny governemanta ihany koa Andriamatoa Mehra noho ny fiheverany ny fampindramam-bola amin'ireo mpandraharaha mpizahatany sy ny mpitari-dia ny fizahantany fa nangataka kosa ny governemanta mba handinika fanomezana ara-bola indray mandeha ihany ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany fantatra rehetra izay mety ho 50 isan-jaton'ny karaman'ireo mpiandraikitra fizahan-tany amin'ny taona 2019 -20 sy Rs. 2.5 lakh (US $ 298,163) isaky ny torolàlana fizahan-tany eken'ny Minisiteran'ny Fizahantany / Governemantam-panjakana ho fanampiana indray mandeha.
Manantena Andriamatoa Mehra fa amin'ny famoahana ny SEIS 2019-20 (Service Export avy any India Scheme) ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany mahazo vola vahiny amin'ny sehatry ny serivisy, izay miandry ny fanambarana ataon'ny governemanta, ny isan-jato dia azo raisina farafahakeliny 10 isan-jaton'ny vahiny. fifanakalozana vola mba hahafahany manome fanohanana ireo mpandraharaha mpizahatany hahafahan'izy ireo miaina sy mamelombelona ny orinasan-dry zareo mandritra io toe-javatra misedra io ary mba tsy hiafara amin'ny tahaka ny mpikambana iharam-boina COVID-19 be dia be ary aleo mahazo oksizenina ao amin'ny orinasany fa tsy miafara amin'ny rivotra.
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any India dia mila fanohanana mitohy avy amin'ny governemanta ihany koa mba hamelomana sy hijanona ho matanjaka amin'ny ho avy. Ny Federasionan'ny Chambers of Commerce and Indostria (FICC) I dia nanoro hevitra ny tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny lisitry ny lalàm-panorenana miaraka ny fizahan-tany any India mba hahafahan'ny Centre sy ny fanjakana manangana politikam-pizahan-tany ho an'ny ny fitomboan'ny fizahantany. Mba hamelomana indray ny fizahan-tany eto an-toerana, ny governemanta dia tokony hanome vola hetra hatramin'ny 1.5 ariary ho an'ny fandaniana amin'ny fialantsasatra an-trano amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana momba ny Travel Travel (LTA).
Androany any India, mandritra ny vanim-potoana nanomboka ny 3 Janoary 2020, ka hatramin'ny 4:47 hariva CEST, 28 Jona 2021, dia 30,279,331 19 no voamarina fa voaporofo ny COVID-396,730 nisy 19 ny maty, raha ny tatitra voaray tamin'ny World Health Organization (WHO). Tamin'ny 2021 Jona 276,255,304 dia totalin'ny vaksinina XNUMX no natolotra.
Manaiky karatra fanaovana vaksiny amerikana izao i Malta